Ballparker: Mepụta Atụmatụ na Mfe | Martech Zone
The ahịa nwee ngalaba na-agbawa na uto, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-amata na ọrụ nke ahịa agbanweela obere oge karịa afọ. Site na oge olile anya ruru gị, ha nyochara gị na ndị na-asọmpi gị n'ịntanetị, ghọta ike na adịghị ike gị ma chọọ ịgbadata nkwupụta.
Otu akụrụngwa nke ụlọ ọrụ teknụzụ na-enyere ndị ahịa aka bụ inyere ndị azụmaahịa aka iru ma kesaa atụmatụ, nkwuputa, atụmatụ na nzaghachi nke RFP (arịrịọ maka atụmatụ). Onu ogugu enwere otutu onu ogugu ndi di na ya, site na ntinye aka nke desktọọpụ nke jikọtara ya na Okwu, site na iji gosiputa atumatu atumatu site na iwe na ike mkparita uka, rue ihe di nfe maka imeputa atumatu.
Onye guzobere David Calvert arụ ọrụ na ụlọ ọrụ n'ụlọnga ihe karịrị afọ iri wee hụ ọdịiche n'ahịa Ballparker. Ballparker bụ ikpo okwu dị mma dị ọcha, ezubere iji mee ka usoro atụmatụ maka ọrụ ị ga-achọ ngwa ngwa ma dịkwa mfe. A na-enweta nke a site na ime ka ikpo okwu dabara maka ngwa mkpanaka niile na kọmputa kọmputa. Uzo a di mgbe nile site na igwe-oji, na-ekwe ka onye ọ bụla rụọ ọrụ na-eke atụmatụ ime ya ebe ọ dị na saịtị, pụọ n'ọfịs ma ọ bụ laghachi na tebụl ha.
Ozugbo e mepụtara atụmatụ ahụ, ọ nwere ike ịbụ na ị ga-emelitere ozugbo site na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ aka ekpe ruo mgbe mmadụ lọghachi n'ọfịs. Ballparker na-egosipụtakwa ngwa ọrụ mkpesa nke nwere ike iji atụnyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'otu ngalaba ma ọ bụ ọnọdụ, yabụ ndị ọrụ nwere ike ịhụ etu ha si arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ ndị ọzọ yiri ya nke na-ejikwa sistemụ ahụ.
Tags: bọlparkerdavid calvertatụmatụ sọftụwiaamaghị softwaresee okwu softwarekwuru